Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha jidka SD-RS-SP1 oo tayo sare leh leh Wistron
Rakaabka waddada qorraxda SD-RS-SP1
Korontada: Guddi Qoraxda (monocrystalline 2.5V/160mA) (2V/140mA)
Batariga: Batariga lithium (3.2V/1000mah) (1.2V/1300mAh)
Midabka LED: Cagaar Cagaar Casaan Jaale Buluug ah
Saldhigga buundadan waddada cadceedda ah ayaa ka samaysan aluminium la shubay, dushana ka samaysan tiknoolajiyad buufin ah.
Qolofku wuxuu ka samaysan yahay walxo kombuyuutar oo la xoojiyay, kaas oo leh iska caabin aad u fiican iyo degganaansho kulul
Awoodda rarka oo ka badan 30 tan, ayaa loo adeegsan karaa bartamaha waddada.
Baradhada qorraxda ayaa aad looga jecel yahay Filibiin.
WISTRON waxaa loo dhoofiyey in ka badan 80,000 oo kumbiyuutar kumbuyuutarrada markab oo la dhigay PH.
Qalabka jirka Daawaha Aluminium+daboolka PC
Koronto Guddi Qoraxda (monocrystalline 2.5V/160mA) (2V/140mA)
Batariga Batariga lithium (3.2V/1000mah) (1.2V/1300mAh)
Iftiin Dhexroor aad u dhalaalaya 5mm*6pcs
Midabka LED Cagaar Cagaar Casaan Jaale Buluug ah
Moodh iftiiminaya Bilig -baxaya ama joogto ah
Saacadaha shaqada 140 saacadood oo loogu talagalay qaababka biligleynaya, 40 saacadood oo loogu talagalay qaababka joogtada ah
Fogaan aragga 1000m (qiyaastii)
Resistance > 40tons (guurto ah)
Nolosha qofka In ka badan 5 sano
Xidhmada 1pcs/sanduuq; 32pcs/Ctn; Miisaanka: 30.2Kg; Cabbirka kartoonka: 54*28*26cm
Heerkulka Shaqada -20 °C ~ + 70°C
Badeecadu waxay leedahay suuf hoose oo caag ah si loo kordhiyo nolosha adeegga
Fiidiyowga soo socda ayaa ah sida loo soo saaro warshadda waddada qoraxda SD-RS-SG5.
Tallaabada Rakibaadda Kaydka Jidka Cadceeda
Si nabadgelyo loogu rakibo Barashada Waddooyinka Qorraxda, aad bay muhiim u tahay in si ammaan ah loo sugo shaqaalaha iyo waddada!
1. Calaamadee booska ku habboon baraha cadceedda ee qorraxda.
2. Ku nadiifi waddada buraash, si aad uga dhigto dusha waddada mid siman, nadiif ah oo qallalan.
3. Ku qodista dalool mashiinka qodista (qoditaanka 125mm) oo nadiifi godka
4. Ku shub xoogaa xabag ah godka oo ku dheji xabagta sagxadda waddada cadceeda si siman
5. Ka hubi 2 saacadood gudahood rakibidda si aad u hubiso in dhammaan baallaha aan si khalad ah loo rakibin oo aysan u qaloocin ama u xuubsanayn cadaadis
6. Kadib 4 saacadood ee rakibidda, xabagta ayaa gabi ahaanba qallajin doonta.
7. Ka saar xarunta go'doominta rakibidda 6-8 saacadood gudahood ka dib rakibidda baraha cadceedda ee qorraxda.
Noocan ah haraaga waddada qorraxda ayaa asal ahaan barbar dhigaysa dusha waddada ka dib rakibidda, yaraynta xoogga saamaynta gaadhigu ku leeyahay kalkaalka waddada, ka nabdoon, cadaadis badan u adkaysta iyo cimri dheer
Hore: Jidadka qorraxda ee SD-RS-SG5
Xiga: Jidadka qorraxda ee SD-RS-SG3
Solar Cat Indhaha Indhaha Waddo
Baraha Waddooyinka ee Cadceeda Ku Shaqeeya
Iftiinka Jidka Cadceeda
Barashada Qorraxda Wadada
Jidadka qorraxda ee SD-RS-SG5
Caaga Jidka caaga SD-RS-P5